१७०० विन्दुमाथि उक्लियो नेप्से, बुधवार पनि ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
कात्तिक २६, काठमाडौं । बुधवार २८ दशमलव ८९ अंक बढेर नेप्से परिसूचक १ हजार ७०७ दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन १ हजार ६८१ दशमलव ८३ विन्दुदेखि खुला भएको बजार निरन्तर बढेर बन्द भएको हो । ठूला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ५ दशमलव २३ अंक बढेर ३३५ दशमलव ६२ विन्दुमा पुगेको छ ।
बुधवार रू. ४ अर्ब ९ करोड ९६ लाख ४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । मंगलवार २५ दशमलव ९८ अंक बढेको बजारमा रू. ४ अर्ब ९ करोड ६१ लाख ९० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकम पनि बढी रहेको छ । बुधवार १९५ ओटा कम्पनीको ३६ हजार ८९३ पटकको व्यापारमा १ करोड २५ लाख २३ हजार ६५१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
यस दिन नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २५ करोड ९० लाख २८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सर्वाधिक बजार पूँजीकरण रहेको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य बुधवार प्रतिकित्ता रू.४२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९०७ पुगेको छ ।
बुधवारको बजारमा व्यापारिक समुहका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यस दिन व्यापारिक समुहको परिसूचक सर्वाधिक ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै यो दिन बैंकिङको १ दशमलव १५ प्रतिशत, होटलको २ दशमलव ५३ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव १४ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ४ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ६ दशमलव २१ प्रतिशत, अन्यको ४ दशमलव १२ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव २६ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ०७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको ४ दशमलव ९८ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
बुधवार वित्त समुहको परिसूचक भने शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।दोहोरो अंकले बढेको बजारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य यस दिन प्रतिकित्ता रू. ४९५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५ हजार ४४५ पुगेको हो ।
त्यस्तै यो दिन लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको इकाईमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, विशाल बजार कम्पनीको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको ९ दशमलव ९० प्रतिशत र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ८२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ ।
बुधवार आईसीएफसी फाइनान्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ४ दशमलव ७८ प्रतिशतले घटेको छ । यो दिन उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १५ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २९९ कायम भएको छ ।
जगदम्बा स्टीलको कवाड गलाउने भट्टी विष्फोट, ४ जना कामदार घाइते[२०७७ मंसिर, १३]
सातामा ३१ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार, परिसूचक ११५.१२ अंक माथि उक्लियो [२०७७ मंसिर, १३]
अबको नेतृत्व महिला उद्यमीलाई साथ लिएर जाने हुनुपर्छ : शारदा रिजाल, महिला उद्यमी [२०७७ मंसिर, १२]
सडक सञ्जालमा जोडियो पर्यटकीय खुम्बु क्षेत्र[२०७७ मंसिर, १२]
१९ ओटा वित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था : सबैभन्दा बढी नाफा आइसीएफसी फाइनान्सको [२०७७ मंसिर, १२]
१८८१ को ऐतिहासिक उच्च विन्दुलाई पार गर्दै नेप्से १८९३.२४ विन्दुमा, कारोबार रकम पनि हालसम्मकै उच्च[२०७७ मंसिर, ११]
३२.५१ अंकले बढ्यो नेप्से, ४ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य ९%भन्दा बढीले वृद्धि (२ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, ११]
नेप्से हालसम्मकै १९०० बिन्दु माथिको कीर्तिमानी उचाईमा [२०७७ मंसिर, ११]
४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा सर्वाधिक हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको (१ बजेको अपडेट)[२०७७ मंसिर, ११]